okuzinzileyo kwephayiphu elilodwa lamapayipi nokufakwa Abakhiqizi - China iphakethe elizinzile lamapayipi nokufakwa abahlinzeki & Ifektri
Isiqinisi sokushisa seCalcium Zinc PVC samapayipi ahanjisiwe ahambisa amapayipi nohlelo lwePVC lokudonsa
Amapayipi we-PVC akhiphiwe nezingxenye zomjovo zidinga imikhiqizo esebenza kahle kakhulu kwezobuchwepheshe, izidingo ezinzima kakhulu zezomnotho nezemvelo. Uhlelo lwe-PVC piping lubandakanya osayizi abahlukahlukene, ubujamo nemibala, futhi izithasiselo ezithile namasu wokukhiqiza angathola imikhiqizo ehamba phambili. Kusebenza ebangeni lezinhlelo ezahlukahlukene ze-PVC piping: amapayipi okuhambisa amanzi, izithasiselo zamapayipi endle zingenza ngempumelelo amapayipi asezingeni eliphezulu nokufakwa, futhi zinikeze izici ezithile kwimikhiqizo eqediwe njengokuqina okuphezulu kwemishini nempilo ende. Amapayipi we-PVC nokufakwa kuyizingqalasizinda zomhlaba wanamuhla. Ukusetshenziswa kwabo emhlabeni jikelele kungenxa yezici zabo ezilusizo, kufaka phakathi ukuqina, ukuqina kokufakwa nokugcinwa, ukumelana nokugqwala, ukuvuselelwa kabusha, ukuvunyelwa okuphansi kakhulu, namandla amakhulu wokumelana namakhemikhali nezindleko ezinhle kakhulu.
Ama-PVC Stabilizers for casing & plumbing conduit kagesi ipayipi elingaphansi komhlaba
Ama-PVC stabilizers akhiqize amapayipi afakwe i-PVC asetshenziswa kakhulu ekwakhiweni komphakathi, uhlelo lwezimboni lwamanzi asendlini, uhlelo lwamapayipi okuhambisa amanzi emadolobheni, indawo yasolwandle yasolwandle, indawo yokuhlala, indawo yezitshalo yohlelo lokuphakelwa kwamanzi, indawo yokulungisa amanzi, ingadi, ukuchelela, ubunjiniyela bokumba kanye eminye imikhakha. Ukusetshenziswa kwabo emhlabeni jikelele kungenxa yezici zabo ezilusizo, kufaka phakathi ukuqina, ukuqina, ukufakwa nokugcinwa kahle, ukumelana nokugqwala, ukuhamba okuphansi, izakhiwo ezinhle zomshini, ukuvuselelwa kabusha, ukungena kwamandla okuphansi ngokweqile, namandla amakhulu wokumelana namakhemikhali nezindleko ezinhle kakhulu.
Isifudumezi Sokushisa se-PVC kanye ne-UPVC fittings amapayipi okuhambisa amanzi ngepayipi le-PVC
I-calcium Zinc heat Stabilizer yizici ezihlukile zamapayipi we-PVC nokufakwa. Ingakhuliswa ngokwengezwa kwezithasiselo ezikhethekile, ukudala okuqinile kodwa ngezinto zamapayipi ezinjenge-PVC eguquliwe, amapayipi endle anamapulangwe amaningi kanye namapayipi okuhambisa amanzi, nokungavikeleki kwesimo sezulu, ngaphezu kwamapayipi okuhambisa amanzi emhlabathini. Lezi zithasiselo, kanye nokuqinisa ukufudumeza nokugcoba ukukhishwa kwamapayipi, kungezwa entweni eluhlaza ye-PVC kumxube okhethekile onejubane ukukhiqiza inhlanganisela eyomile eyenziwe ngokukhethekile ngenqubo yokukhishwa kwepayipi. I-CaZn Stabilizers nayo ixazulula inkinga yepuleti ephansi, ukusebenza okuhle kakhulu kokusebenza nokusebenza okuhle kwezindleko.
I-PVC Stabilizer yepayipi lokunisela lokuhambisa amanzi ipayipi le-PVC UPVC Ipayipi lePayipi lePayipi lamanzi
I-Calcium Zinc PVC Stabilizer yethu inikezela ngamapayipi we-PVC akhishwe kanye nezingxenye zomjovo kudinga imikhiqizo enokusebenza okuhle kakhulu kwezobuchwepheshe, izidingo ezibucayi kakhulu zezomnotho nezemvelo. Uhlelo lwe-PVC piping lubandakanya osayizi abahlukahlukene, ubujamo nemibala, futhi izithasiselo ezithile namasu wokukhiqiza angathola imikhiqizo ehamba phambili. Kusebenza ebangeni lezinhlelo ezahlukahlukene ze-PVC zokubhobha: amapayipi okuhambisa amanzi, amapayipi endle, amapayipi wokunisela, imijikelezo nezithasiselo zemigudu yekhebula kungenza ngempumelelo amapayipi asezingeni eliphezulu nokufakwa, futhi kunikeze izici ezithile kumikhiqizo eqediwe. I-stabilizer inokuqina okuhle kokushisa, uketshezi oluhle, ipuleti ephansi ukuphuma nokuqedela okuhle kakhulu.
I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi, I-PVC Heat Stabilizer, I-PVC One Pack Stabilizer, PVC Izithasiselo, I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile, Isisimamisi se-PVC,